No Jasmine flower (ပန်း စံပယ်) in the Royal Court, so use the Khan Pwint (ခံပွင့်) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« My uncle Gorbachev
Myanmar song: Outstanding good quality brilliant citizens or လူချွန်လူကောင်း »
No Jasmine flower (ပန်း စံပယ်) in the Royal Court, so use the Khan Pwint (ခံပွင့်)
ခံပွင့် (ခင်နှင်းယု) taken from lettwebaw
Sorry, I wrote wrongly first. There isasaying, actuallyapoem and song in Burmese: “နန်းအလယ် ပန်းစံပယ် မပေါ်ခိုက်ဟာမို့၊ အလိုက်တော် တန်သင့်အောင်လို့ ခံပွင့်ကိုကုံး၊”
Because there was no Jasmine flower in the Royal Court, we have to (just content or satisfy) use other cheap flower called Khan Pwint or ခံပွင့် (as the temporary substitute) or အဖြည့်ခံ (သို့) ခံပွင့်.
အထက်ကနှယ် အစချီထားသော နာမည်ကျော် စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်) ခင်နှင်းယု ရဲ့ ၀တ္ထုတိုကို အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဖတ်ရှုလိုသူများ The Trodden Flower ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာ သွားဖတ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ We could also read her storey in lettwebaw ‘s blog.
TT THEIN TAN- Htway Nyo
Tags: Burmese language, Royal Court
This entry was posted on April 2, 2011 at 6:58 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.